Etanôlina fandrehitra Fa inona marina
Kaomisera Alexandre Ranaivoson «Tena miparitaka izay tsy izy ny rongony eto »
Ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana Nanao tomban`ezaka an`ireo mpiasa
OFMATA Mikatso fa tsy misy Tale Jeneraly
Boriborintany fahaefatra Tsy mandika kopia amin’ny teny Frantsay intsony
“Raha ny etanôlina vita tamin’ny fary, dia io toaka gasy io mihitsy izay mahery noho ny herin’ny alikaola 90°.
Raha lohany amin’io zava-pisotro misy alikaola nentim-paharazana io no dorana dia manome afo miloko manga. Mitaky singa tsy maha-te hitelina afangaro amin’ity vokatra vaovao voizin’ny vadin’ny Filoham-pirenena ity, raha ts’izany hosotroin’ny olona”. Hoy i Dieudonné Rabe, Antrôpôlôgy , mpampianatra mpikaroka sady mpikaroka mpampianatra izay efa nitety an’izao tontolo izao mikasika ny fomban-drazana sy ny toaka gasy. Nanambara ity mpampianatra amin’ny Ambaratonga ambony ity izay nanovo fianarana tany Parisy fa fony vao nososoloina toaka ny lasantsy tany Brezila dia mamo ny saofera ary sahirana ny mpitandro filaminana tamin’ny “alcootest” izay mody lazain’ny mpamily fa tsy nandeha ny solika ka voatery notrohana. Marihina fa oksizenina sy hidrozenina ary karbôna avokoa no mamorona ny toaka gasy sy ny etanôlina, raha amin’ny lafiny simia. Tsy mifanalavitra amin’ny vidin’ny toaka gasy ihany koa izy io. Efa fahita tany amin’ny faritra be fary izy io tahaka ny Antsinanana, Atsimo Antsinanana, ny tapany avaratry ny Nosy. Ankoatra ny fary, vita amin’ny mangahazo ihany koa izy io tany Bongolava sy Anjozorobe. Ny Minisitry ny Fambolena amin’izao, izay niandraikitra ny tetik’asa “prosperer”, efa nitrandraka izany. Maro amin’ny mpanara-baovao no mihevitra fa tokony jerena akaiky ihany koa miaraka amin’ity tetik’asa ity ny toaka gasy vaovao manara-penitra, mba hanaraka ny dingana ara-pahasalamana sy ny fatran’alikaola ary ny lalàna mifehy azy izy ireny mba ho azo trandrahana tahaka ireo Champagne, Whisky, Vodka izay mampalaza ny firenena niaviany. Araka ny tatitry ny tetik’asa «Prosperer» tamin’ny Fier-Mada 2016, mangahazo 2,5 kg, dia ahazoana etanolina 1litatra izay azo andrahoana sakafo mandritra ny ora 4 na 5. Ny velarantany 1ha kosa mamokatra fary 80 taonina, izay ahazoana siramamy 8 taonina ary “ethanol” 1300 litatra. Araka ny voalazan’ny manam-pahaizana, mahatratra 360 litatra isan-taona, isan-tokatrano amin’ny io entona fandrehitra io no ilain’ny fianakaviana iray. Ka 1 440 000 000 litatra izany no ilaina vokarina ho an'ny Malagasy rehetra. Tany 2 tapitrisa ha no ho volena fary, izany hoe 3,5% n'ny velarantan’ny Madagasikara. Ahazoana siramamy 6 tapitrisa taonina io, ary etanôlina 2,6 miliara litatra, izay ampy tsara hamatsiana ny Malagasy rehetra. Ny faikam-pary ihany no itenehana izany. Mila mijery lavitra toy izany fa ho ritra, any aoriana any, ny ala atsinanana izay miantoka ny arina fandrehitra hoan’ny tokatrano an-tapitrisany maro.